Ciidamo Katirsan Kuwa Jubbaland Oo isku Diyaarinayo Inay Weararo Ku Qaadan Fiisimada Al-Shabaab – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Maamulka Jubbaland ee ku sugan deegaanka Buulo gaduud ee Gobolka Jubadda hoose, ayaa isku diyaarinaya inay wajahaan deeganada Shabaabka ay ka joogaan Gobolkaasi.
Saraakiisha ciidamada Maamulka Jubbaland ee aaga Buulo gaduud ayaa waxa ay sheegayaan in diyaargaroow loogu jiro weeraro culus oo lagu qaado deeganada Shabaabka ay joogaan.
Meel aanan ka fogeyn Buulo gaduud ayeey ku sugan yihiin ciidamada Shabaabka oo waxa ay halkaasi isku hor fadhiyaan ciidamada Maamulka Jubbaland.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Jubbaland ayaa shalay tagay deegaanka Buulo gaduud oo ciidamada halkaasi kula hadlay, una sameeyay dhiiragelin ku aadan dagaalka ay kala soo horjeedaan Ururka Al Shabaab.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa horay u balan qaaday in ciidamada dhawaan ay xureen doonaan ilaa Gobolka Jubadda Dhexe oo Xoogaga Shabaab Saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin.
Shabaab qudhooda waxa ay leeyihiin cudud Milateri oo aanan la yareysan karin, maadaama ay dagaal kala soo horjeedaan ciidamada Amisom oo aad u badan iyo ciidamada Soomaalida.